३ दिनसम्म कहाँ-कहाँ पर्दैछ हावाहुरीसहित असिना पानी ? यस्तो छ मौसमसम्बन्धि ताजा अपडेट — Imandarmedia.com
३ दिनसम्म कहाँ-कहाँ पर्दैछ हावाहुरीसहित असिना पानी ? यस्तो छ मौसमसम्बन्धि ताजा अपडेट
काठमाडौं । देशभरको मौसम मंगलबारअघि सुधार नहुने भएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मंगलबारसम्म हावाहुरीसहित असिना पानी पर्ने क्रम रोकिने छैन । महाशाखाका अनुसार अहिले पनि मुलुकको पूर्वी भू-भागमा वर्षा भइरहेको छ ।
आज दिउँसो मुलुकका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीसहित असिना पानी पर्ने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ । पश्चिमी, स्थानीय वायु तथा बंगालको खाडी र अरब सागरबाट आएको जलवाष्पयुक्त वायुको प्रभाव कायमै रहेकाले वर्षा जारी रहने महाशाखाको अनुमान छ ।
महाशाखाका अनुसार अहिले पूर्वी भू-भागमा सामान्य वदली र मध्य पहाडी भू-भागमा आंशिक वदली भइ बाँकी भू-भागमा मौसम सफा भएपनि दिउँसोसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ । दिउँसोसम्म देशका मध्य, पूर्वी र पश्चिमी पहाडी भू-भागमा सामान्य वदली भई देशका पहाडी भू-भागमा मेघगर्जन, चट्याङ्ग तथा असिना र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् ।
यसैबीच ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा गएराति लागेको आगो साढे ७ घण्टामा नियन्त्रणमा आएको छ । गएराति १० बजेदेखि फुङलिङ बजारको एक होटलबाट लागेको आगो शनिबार बिहान साढे ५ बजेतिर नियन्त्रणमा आउँदासम्म ७ घर जलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार सात वटा घर र पाँच वटा घुम्ती पसल जलेर नष्ट भएका छन् । गएराति भट्टराई होटल एण्ड लजबाट आगलागी सुरु भएको थियो । आगो दमकल, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा साढे ७ घण्टामा नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।ञ
एक घरबाट अर्को घरमा फैलन नदिने गरी २ घण्टाजतिमा आगो नियन्त्रणमा लिइए पनि पूर्णरुपमा निभाउन भने विहान साढे ५ बजेसम्म लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिए ।
आगलागीको कारण भने खुलेको छैन । आगलागीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । हरेक वर्षजस्तो आगलागी हुँदै आएको ताप्लेजङमा यसअघि २०७१ सालको आगलागीमा ९० परिवार विस्थापित भएका थिए ।